Akpa ọka CPT na -enye ụzọ nchekwa dị ọnụ ala nke na -ejigide ịdị mma ọka ruo oge nke na -enye ndị na -emepụta ohere ịnweta ọnọdụ ahịa ka mma. .
Fụọnụ 750mm Wide Green Silage Film
Ọdịmma nri anụrị na silage bale na -adabere nke ukwuu n'ịdị mma nke ihe mkpuchi ahụ. Ihe nkiri silage anyị nọ n'ọkwa dị mma ma enwere ike ịhazi ya iji mezuo ihe ndị ahịa niile chọrọ.
Ihe Nkiri Silver Mulch Silver
Ejirila mulch plastik na -azụ ahịa na akwụkwọ nri kemgbe mmalite 1960. Ejirila ụdị mulch atọ dị mkpa na mmepụta azụmahịa: ojii, doro anya, na rọba ojii ojii.
5-coextruded fim; PE-EVA-EVA-EVA-MLLDPE yana ụdị polyethylene dabere na metallocene na EVA -copolymers.
Osisi mkpụrụ osisi berry chọrọ anyanwụ zuru oke ka o too na ịmị mkpụrụ nke ọma, iru mmiri kwesịrị ekwesị na njikwa okpomọkụ.
Teknụzụ na -atụgharị ọkụ
Ihe nkiri ejiri ọdịnaya EVA dị elu nke agbakwunyere onye na -agbasa ihe na -emepụta n'ime ihe nkiri ikuku ikuku nwere ike ịgbasa ọkụ ma na -abawanye ihe mgbochi IR ma n'ọnụ ụzọ ma ọpụpụ nke griin haus.
Ihe nkiri na -acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na -acha ọcha na -enyere aka idobe okpomoku na -agbanwe agbanwe site na ibelata ebe na -ekpo ọkụ na ntụpọ oyi na -adịkarị na griin ha.
Mgbasa ozi ihe nkiri nke ụwa na -egosi pasent nke ọkụ na -abanye na griin haus. Osisi chọrọ oke nnyefe ọkụ na mpaghara PAR nke ụdịdị (400-700 nm) ka o nyere aka na photosynthesis na usoro morphogenetic ndị ọzọ metụtara.
Ihe nkiri na -eguzogide okpomoku dị elu
CPT mepụtara ihe nkiri F1406 na -eguzogide okpomoku dị elu. nke e mere maka njem ụgbọ elu. Ọnọdụ nchekwa nchekwa dị mma nwere ike ịbụ ogo Celsius 120, nnwale nnwale ụlọ nyocha nwere ike iru ogo 150.
Ultra-ike Flex tank nkiri
A na -ejikarị ndị na -ebu ihe na ndị na -eji ihe eji eme ihe dị ka ihe ngwọta akụ na ụba maka ibufe ngwaahịa kemịkal, ọka, ọka, mmiri mmiri, ngwaahịa ọka na ihe ndị ọzọ.
CPT nwere ike ịnye gị ogo dị elu, ihe nri kwadoro, ihe polyethylene ma jikọta ike na ịdị nro dị elu iji nweta nguzogide dị elu nke bụ ihe kachasị mkpa na azụmaahịa akpa.
Elu Ogo Bale Net
Kechie Plastic Bale Kechie na -aghọ ihe ọzọ maka ejima maka ịkpakọba bales gburugburu. Netting a dị nro nwere uru ma e jiri ya tụnyere ejima:
ojiji nke ụgbụ na -eme ka nrụpụta dị mma n'ihi na ọ na -ewe obere oge iji kechie otu bale. Ị nwere ike ịchekwa oge karịa 50 %. Netting na -enyere gị aka ime bales ndị nwere ọdịdị dị mma, ọ dịkwa mfe ịkwaga na ịchekwa
Copyright - 2010-2021: Ikike niile echekwabara. Ngwaahịa apụta, Map saịtị, Ihe nkiri Bale Kechie Maka Ọrịre, Spring Waya N'ihi Ịkpọchi Film, Mkpọchi mkpọchi ihe nkiri Greenhouse, Profaịlụ na Zigzag Spring Waya, Profaịlụ mkpọchi ihe nkiri Poly Greenhouse, Profaịlụ mkpọchi griin haus, Ngwaahịa niile